Rakotoamboa Jean-Louis : “Zo fototra ny midina an-dalambe” | NewsMada
Rakotoamboa Jean-Louis : “Zo fototra ny midina an-dalambe”
“Mampiasa io lalàna tsy hanome alalana izay manao fihetsiketsehana an-dalambe na fivoriana ankalamanjana io ny mpitondra nifandimby teo. Satria atahorana sao hanongam-panjakana, atahorana sao hiteraka fikorontanana…” Izay ny fijerin’ny filoha nasionalin’ny Teza, Rakotoamboa Jean-Louis, manoloana ny fandrarana ny hetsika sy fidinana an-dalambe tato ho ato.
Ho an’ny Teza manokana, tsotra ny fanamboarana an’io: rehefa bemarenina ny mpitondra, zo fototra ny midina an-dalambe mampiseho an’izany tsy fankasitrahana ny ataon’ny mpitondra izany. Ny atao, tsy mangataka fahazoan-dalana amin’ny mpanatanteraka, fa milaza amin’ny mpitandro filaminana mba hahazoan’izy ireo miaro izany zo fototry ny demokrasia izany, araka ny fanazavany.
Avelao haneho hevitra ny olona
Anjaran’ny mpitandro filaminana ny miaro ny faritra saro-pady rehetra mba tsy hisian’ny korontana. Avelao haneho hevitra ny olona, avelao hanao fety ny olona amin’izany tsingerintaona izany… Zo fototra amin’ny demokrasia izany, ka tsy tokony hoteriterena fotsiny. Manao ny tena, tsy misy maneritery. Nefa nony manao ny hafa, tsy avela… Miteraka korontana izany.
“Lalàna adaladala no miteraka ady sy fikorontanana eto amintsika”, hoy izy. Matahotra ny hotrongisina ny mpitondra. Tsy omeny fahazoan-dalana ny tena, rehefa mangataka alalana ny tena hanao fivoriana ankalamanjana na hidina an-dalambe noho izay fahatahorana izay. Nisy hatrany izay hatramin’ny Repoblika I, ka hatramin’izao.
Toy izay nitranga farany teo: hanao fankalazana ny faha-15 taon’ny tsingerintaony ny Tim, atahorana sao hampiseho hery izany, dia tsy omena fahazoan-dalana. Ny lalàna mihitsy no tsy mety eto Madagasikara. “Izay ny mahatonga ny Teza milaza hoe: tokony hifampidinika ny rehetra hanamboatra ny fototra iorenan’ny demokrasia eto”, hoy ihany izy.